သက်ဝေ: သာတဲ့ ပုဂံမြေ (၅)
Posted by သက်ဝေ at 5:04 PM
မိုးငွေ့........ May 28, 2015 at 5:20 PM
ဘလော့မရေးဖြစ်တော့ပေမယ့် သံယောဇဉ်မပြတ် လာလာဖတ်လျက်ပါပဲလို့...း)
Anonymous May 28, 2015 at 5:28 PM
"မိတ်ဆွေတွေ တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။" တဲ့... ခိခိ...ဖယူဖယူကြော်တိန်းလေသံနဲ့ပါလား...စိတ်မဆိုးမှန်းသိလို့ ချစ်လို့စတာပါရှင့်..။
Thanks Ma Thet Wai. There are many people still reading blog and please dont stop writing. We dont like FB.
မေဓာဝီ May 28, 2015 at 10:05 PM
ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ် အမသက်ဝေ။
ပုံတွေလဲကြိုက် စာတွေလဲ သဘောကျ။
အချိန်တိုင်းလူပြည့်နေပြီး အကြာကြီး တန်းစီရတဲ့ စင်္ကာပူကစားသောက်ဆိုင်ဆိုတာလဲ ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးလို့ သိရပြီ။ :)
ပုဂံရောက်တုန်းက ထန်းရည်ချို မသောက်ခဲ့ရဘူး။ ခွက်ကလေးတွေနဲ့ တိုက်နေတာ သူများတွေသောက်လို့ ကိုယ်လဲ တခွက်ယူသောက် ကြည့်မိတာ သောက်ပြီးမှ မီးတောက်အရက် ဖြစ်နေမှန်း သိရတယ်။ :D
ထန်းလက်ဗူးကလေးတွေနဲ့ LV အိတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ရေးထားတာဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။
Bonus တွေ အများကြီးရလို့လဲ ဝမ်းသာပါ၏။
နောက်ထပ်ခရီးတွေသွားရင်လဲ ခရီးသွားပို့စ်လေးတွေ ရေးပါအုံးလို့ ....
ဆွေလေးမွန် May 29, 2015 at 11:54 AM
ပုဂံဘုရားဖူး ခုထိ မရောက်ဖြစ်သေးဘူး အစ်မသက်ဝေ .. သွားမယ်လို့ အားခဲထားပေမယ့် မရောက်ဖြစ်သေး. ခုလိုဓာတ်ပုံတွေ ဝေေ၀ ဆာဆာနှင့်တွေ့ရပြန်တော့ အတော်သွားချင်တယ် ကွယ်.. :) :)
အစ်မ သက်ဝေ ညီမ အစ်မဘလော့ကို အမြဲလာတယ် ကျေးဇူးလည်းတင်တယ် ဘလော့အများစုဆက်မရေးတော့တာကိုစိတ်မကောင်းဘူး
Ma Tint May 29, 2015 at 4:15 PM
မသက်ရေ... တင်ခဲ့သမျှ ပုဂံမြေနဲ့အတူ ဝေေ၀ဆာဆာဓာတ်ပုံတွေအားလုံး ကော်ပီခွင့်ပြုပါနော်... အခုမှခွင့်ပြုချက်တောင်းမိတယ် ... :)
Nge Naing May 30, 2015 at 3:55 PM
မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်ဖြစ်ရင် ပုဂံဘုရားသွားမဖူးခင် ကြိုပြီး သိနေအောင် မသက်ဝေပို့စ်ငါးခုစလုံး လာဖတ်ပြီးမှ သွားလို့ရပြီ။
Iora May 30, 2015 at 9:58 PM
ခရီးသွားပို့ စ်လေးတွေ သွားဖြစ်ခဲ့ရင် ထပ်တင်အုန်းနော်။
အထက်ပုိုင်းကတစ်ယောက်ရေးသလုို ကုိုယ်တုို့ လို ဘလော့အမြဲဖတ်နေတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။
ဘလော့ကတော့ စာပေနဲ့ ဝါသနာပါရာ အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ 
ရုိုးရုိုးလေးနဲ့ ခန့် နေတဲ့နေရာမုို့ ဖတ်နေမှာပါ။
စူးနှယျလေး June 3, 2015 at 2:05 PM
rose of sharon June 15, 2015 at 2:54 PM
I've never been to Bagan, I wish I can go ther one day with my family.